IPad Air iray no may tao amin'ny fivarotana Vodafone any Aostralia | Vaovao IPhone
IPad Air iray no may tao amin'ny fivarotana Vodafone any Aostralia
Alex Ruiz | | iPad, About us
Una fivarotana vodafone in Canberra, Aostralia, voatery nafindra taorian'ny maodely iray vaovao iPad Air Apple dia ho may ary mitaky ny fidiran'ny sampana mpamono afo ao an-toerana, araka ny voalaza news.com.au. Tranga iray hafa misy olana afo an'ny fitaovana iray avy amin'ny orinasa Cupertino izay azo antoka fa hitety an'izao tontolo izao ary ilaina ny mijery raha miverina hetsika hafa mitovy amin'ity modely ity.
Izany no tantara nalaina avy amin'ny masoivohom-baovao Australiana:
"Fipoahana afo" no niseho tao amin'ny seranan-tsambo iray maodelin'ny demo demo iPad, nanamafy ny mpitondra tenin'ny fivarotana Vodafone. Nantsoina ny sampana mpamono afo taorian'ny fivarotana feno setroka sy ireo pitik'afo mitohy nipoitra avy teo amin'ny seranan-tsambon'i iPad.
Tena nahagaga ny lozam-pifamoivoizana saingy tsy nisy naratra. Nandritra izay taona maro izay dia nisy tranga mitovy amin'izany tamin'ny fitaovana iPhone na iPad, saingy izy rehetra dia mifandraika amin'ny fampiasana kopian'ny mpandefa entana na Apple tsy ofisialy. Ny orinasa dia efa namoaka a programa fifanakalozana amin'ireo charger ireo. Saingy amin'ity tranga ity dia misy zavatra miova, tsy fahita firy ny fivarotana Vodafone ofisialy mampiasa charger izay tsy tena izy na avy amin'ny marika hafa ankoatran'ny Apple, ho fanampin'ireny fampisehoana fitaovana ireny dia matetika omen'ny orinasa, noho izany dia tranga hafahafa mendrika hianarana. Noho io dia notaterin'ny magazay Vodafone ihany koa fa nandefa solontena tany amin'ilay toerana i Apple mba hanangona ny iPad hanaovana famotorana bebe kokoa.
Tokony hanadihady amin'ny antsipiriany izay mety ho nahatonga an'io tranga io i Apple, raha a overheating Seranan-tsambo herinaratra na olana ara-pitaovana hafa mifandraika a kileman'ity fitaovana ity ary raha misy fiatraikany amin'ny iPad Air sisa ity olana ity izay efa eo am-pelatanan'ireo mpividy vaovao azy. Olana matotra ity, tsara kokoa raha tranga mitokana, satria raha tsy afaka manohitra ny fividianana ity fitaovana ity ho fitandremana ny olona. Raha misy mpamaky antsika manana iPad Air afaka maneho hevitra raha mafana be ity maodely ity rehefa mamaly.
Fanazavana fanampiny - Ny programa fifanakalozana charger dia hitarina amin'ny firenena hafa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » IPad Air iray no may tao amin'ny fivarotana Vodafone any Aostralia
Mitranga amiko izany amin'ny iphone 5
Joaquin Rodriguez dia hoy izy:
Rehefa mitranga aminao izany ary mirehitra, dia heveriko fa manamboatra ny tenany izy ary may indray, sa tsy izany? 😉
Valiny tamin'i Joaquín Rodríguez
Ho an'ny tb, manana maromaro aho! Rehefa may aho dia maka iray hafa ao anaty vatasarihana.
Mahatsikaiky ny vazivazy ... Tsy mino an'ity vaovao ity intsony aho, toy ny horonantsarin'ilay mpangalatra, MANDRESY foana fa misy vokatra Apple vaovao mivoaka, mirehitra ....
Coke Martin Martin dia hoy izy:
Valiny ho an'ny Coke Martin Martin
Vaderiq dia hoy izy:
Valiny tamin'i Vaderiq
Efa fantatro fa lehilahy adala ianao, tsy mila ilainao akory io aaaaaaaaaajhajhjaa clown
Manana ny rivotra iPad aho ary mahafinaritra izany!
Tsy mafana amiko, na izany aza tena marina fa mafana be ny iPhone 5
Alexanderxluis dia hoy izy:
Ny zavatra tsikaritro fa lazain'izy ireo hatrany, may ny iPhone ary izao may ny iPad, izay raha ny lojika dia afaka mino fa ny iPad dia afaka mameno efitrano misy setroka fotsiny fa birao 2 x 2
Valiny tamin'i Alejandroxluis
Apple sy ny vokatra maharikoriko !! azo antoka fa ny takelaka manaraka ho ahy dia iray amin'ny Android na Windows
iFire dia hoy izy:
Azo antoka, satria ny rafitra miasa no mahatonga azy io ho may.
Raha tsy fantatr'izy ireo ny antony nahatonga ny afo, dia miahiahy aho fa fantatrao, angamba ny vesatra be loatra amin'ny ampahan'ny rafitra amin'ny processeur, nahatonga ny hafanana ambony ...
Tsy izany ny zava-misy, kilema finday / fivoriambe hatrizay, ny porofo dia raha ilay rindrambaiko no nipoaka ny iPads tamin'ny farany ...
Angamba izany no nitranga tamin'ny alàlan'ny fikirakirany 64-bit sy ny Ramany 1GB rehefa te-hihazakazaka vorona Angry izy, be loatra izany ary nifoka XD
(Io no hany App manana sary maro noho ny an'ny appstore)
Mandehana olona izay mifanena aminao ... raha te-haneho hevitra momba ilay lohahevitra ianao aloha dia alao antoka fa manana fahalalana momba ny rafitry ny solosaina ianao fa tsy ny zava-drehetra dia mihodina manodidina ny lalao iray: ')
Wow, hendry tokoa ianao!
Topazo maso ny tena hazakaza-piara 3, basy aloka na maro hafa, alohan'ny hitenenana fa ny vorona tezitra dia lalao manana sary "bebe kokoa" ao amin'ny AppStore 😉
Ary araka ny nolazain'i Lolo, tsy ny lalao akory no manodidina ny zava-drehetra
Tsy haiko raha mirehitra izy ireo, ny fantatro dia nividy iPad Air izay heverina fa manana 128 Gb aho fa manana 114. Azonao hazavaina amiko ve fa tena tsara ianao ary fantatrao ny momba an'i Apple rehetra; Fa maninona i Apple no mamitaka ny mpanjifany? Tokony hojerenao ireo zavatra ireo, izay tena manandanja fa tsy hetsika tokana tsy misy dikany. Manasa anao aho hijery an'io, tsy hitako fa mitombina ny fandaniako 900 € eo ho eo amin'ny ekipa iray izay milaza fa manana toetra sasany ary avy eo manana ny karazany. Alefaso, fa amin'ny toeran'ny 128 dia nisy 120 teo ho eo, miaraka amin'izay dia esorin'izy ireo 8 ho an'ny rindrambaiko sns, ekena izany saingy: …… 114 !!!!!, aiza ny 14 GB tsy hita ?? saika ny fahaizan'ny telefaona !! ROBBERY IZAO !!!. Manangana aho, hametraka fitakiana amin'ny fanjifana.
mono dia hoy izy:
Satria ny rafitra fandidiana sy ny rindranasan'ny ozinina dia maka habaka fa tsy paoma misy fitaovana fotsiny
Mamaly an'i Mono
ALEJANDRO dia hoy izy:
Raha mividy kapila mafy 500 GB ianao dia tsy hanamarika maimaim-poana 500 GB na dia tsy misy endrika aza dia hilaza aminao fa tsy dia manana fahaiza-manao izy, satria ny rehetra .. ..
1024 mb dia TENA GB fa tsy 1000 izay manodidina 1GB
ankoatro dia esory ny latabatra fizaràna mihena ny rindrambaiko ary ny olon-kafa hanome anao 114 GB ny fampiasana saingy izany dia iray manontolo USB 8 GB
tsy manisy marika 8 GB MAIMAIMPOANA 7.5 ary dvd mitovy… ary CD… SAMY ARAKA NY DALAM-PAHALALANA ihany no tsy tsikaritra satria kely ny habeny….
Valio amin'i ALEJANDRO
Salama, izay lazainao fa azoko ary misy dikany, fa araka ny filazanao azy, ny USB 8-gigabyte dia manana zavatra 7.5 tena ara-dalàna sy ekena. Ny tsy ekena dia ny 128 ka hatramin'ny 114 GB hivoaka avy ao anaty boaty miaraka amin'ilay rindrambaiko default. Tsy misy rafitra fandidiana mitazona toerana toy izany ary kely kokoa ny iOS 7 (fampiharana amin'ny alàlan'ny default). Tsy manana ny fahaizany mivarotra anao izy ireo, izay ihany. Isika rehetra dia manana kapila ivelany, cd, sns, ary fantatsika fa manana zavatra kely kokoa noho izay nomarihany antsika izy ireo, saingy tsy ireo fahasamihafana ireo, heveriko manokana fa fanararaotana izany.
Marina mihitsy! Ary bebe kokoa amin'ny vidiny. Miombon-kevitra aminao aho, raha ny marina dia mitovy amin'ny Galaxy S4, mpampiasa maro no sosotra noho io olana io ihany, hoy ireo mpamatsy vola 16 GB, raha ny tena izy dia afaka 9GB izy ireo. Tena manelingelina izany, tiako manokana ny orinasa mba ho mazava tsara rehefa hivarotra vokatra aminao. Satria volanao io ary tsy maintsy fantatrao izay hoentinao mody.
Luis R dia hoy izy:
Toy izany koa no niseho tamin'ny tany, izay nesorina toy ny 16 gbs
Valio amin'i luis R
Heveriko fa somary diso hevitra izy ireo amin'ny teoria .. tsy hoe mihodinkodina ny isan'ny MB hiteny izy ireo fa manana GB sasany, na koa ny rafitra dia mibodo mihoatra ny 10 GB .. Ny mitranga dia ny fandrefesana an'io mibodo ny rafitra mimari-droa izy ireo.
Ary izao dia holazain'izy ireo fa manomboka amin'ny jailbreak io?
sa hoe mila mandray amin'ny fomba hafa ianao?
sa mila manarona fonony ianao?
Sa ilay tao amin'ny magazay dia nametraka charger tamin'ny sinoa?
ka ianao manapoaka fa ny tavanao tsy mahita izay drafitra hahahahaha!
Ny famerenana azy amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra Home-Sleep dia tsy hisintona intsony 🙂
Huitzi dia hoy izy:
Ny iPad Air ko lasa mafana eo amin'ny ilany ankavanana amin'ny fampiasana 4 ora tsy miova, mahazatra izany !!!
Mamaly an'i Huitzi
Jereo aloha ilay ozinina vaovao izay haorin'i Apple ao Arizona
Tutorial: Ahoana ny fomba hifehezana ny fividianana angona isam-bolana amin'ny FaceTime sy ireo rindranasa hafa